06 / 06 / 2021 06 / 06 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1018 Views စာ0မှတ်ချက် 76939 Stygimoloch Dinosaur ထွက်ပေါက်, 76940 T. rex Dinosaur ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပြပွဲ, 76941 Carnotaurus ဒိုင်နိုဆော Chase, 76942 Baryonyx ဒိုင်နိုဆောလှေလွတ်မြောက်, ကာတွန်း, ဒီနောဆီးယား, Jurassic World, Jurassic World Cretaceous စခန်း, Lego, Lego Jurassic World, သေးသေးလေး, Netflix နဲ့, Owen Grady
အသစ်ကနေတုန်း Jurassic World Lego အစုံလိုက်တွင်အခင်းအကျင်း၏အတိတ်မှအကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်မျက်နှာအနည်းငယ်နှင့် Camp Cretaceous မှဇာတ်ကောင်အသစ်များသည်သူတို့၏ပွဲ ဦး ထွက်တွင်ပါဝင်သည်။
p အဖြစ်art အသစ်အကွာအဝေး၏ Jurassic World မော်ဒယ်များ Lego Group သည် Netflix ၏မကြာသေးမီကကာတွန်းဇာတ်လမ်းများမှဇာတ်ကောင်များကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ Jurassic World Cretaceous စခန်း။ ဒီပြပွဲကဒိုင်နိုဆောများပြည့်နှက်နေသောသဘာ ၀ ဥယျာဉ်သို့အားလုံးပါ ၀ င်သောခရီးကိုအနိုင်ရသောဆယ်ကျော်သက်ခြောက် ဦး ၏နောက်လိုက်များကိုပြသသည်။ ဒါပေမယ့်သင်မှန်းဆမိတဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်မှားသွားပါလိမ့်မယ်။
အပန်းဖြေသူများသည်ကျွန်းတစ်လွှားရှိအပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုအလျင်အမြန်ပြေး။ အမဲလိုက်သည့်မုဆိုးကောင်များ၊ ဤ Campers များသည်သေးငယ်သောရုပ်ပုံများအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့ပြီးတည်ဆောက်မှုများစတင်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သောအက္ခရာများကိုကြည့်ကြပါစို့။
ပေါ်လာသည် 76941 Carnotaurus ဒိုင်နိုဆော Chaseကင်ဂျီး (ဘယ်ဘက်) သည်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောစီးပွားရေးသမားတစ် ဦး ၏သားဖြစ်ပြီးသူ၏ဘ ၀ တွင်တစ်နေ့တာအလုပ်လုပ်ရန်ဘယ်တော့မျှမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ဆမ်မီ (ညာ) သည်တက္ကဆက်ပြည်နယ်မွေးမြူရေးခြံတွင်ကြီးပြင်းခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းခွင်ကျင့် ၀ တ်နှင့်တိရစ္ဆာန်များနှင့်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုရှိသူဖြစ်သည်။ သို့သော် Carnotourus သည်သူတို့၏အစုထဲမှသူမကိုတွေ့ရန်မပျော်နိုင်ပါ။
ဘင် (ဘယ်) နှင့်ဘရွတ်ကလင်း (ညာ) တွင်ပေါ်သည် 76939 Stygimoloch Dinosaur ထွက်ပေါက် အသင်း၏တတိယ၊ လေးချိူအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး နှင့်အတူ။ ဘင်က sm ပါart အသစ်ပေါက်လာသည့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကြောင့်အသက်ရှင်ရပ်တည်ရန်ရဲရင့်ခြင်း၏တန်ဖိုးနှင့်လိုအပ်ချက်ကိုလျင်မြန်စွာလေ့လာသင်ယူသောရှက်တတ်သူ အန်ကီလိုဆောရပ်စ် Bumpy အမည်ရှိသော။
ဘရွတ်ကလင်သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသူမကိုပရိသတ်များနှင့်လာရောက်လည်ပတ်သူများအားသူမ၏ဘဝကိုမြှုပ်နှံပေးသောအပြင်ထွက်သွားသောအလုပ်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည် Jurassic World ပို။ ပင်သူမ၏လူကြိုက်များတိုးမြှင့်၏မျှော်လင့်ချက်၌တည်၏။ သူမ၏အသေးစားပုံစံသည်ပန်းရောင်အရောင်သစ်နှင့်ဆံပင်အပိုင်းအစတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
အသင်းကိုအနိုင်ယူလိုက်ခြင်းတွင် Darius (ဘယ်ဘက်) နှင့် Yasmina (ညာ) တွင်ဖြစ်သည် 76942 Baryonyx ဒိုင်နိုဆောလှေလွတ်မြောက်ဒါရိမင်းကြီးသည်ဒုတိယအကြိမ်ထင်ရှားသော်လည်း၊ 76940 T. rex Dinosaur ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပြပွဲ.
Yasmina သည်အားကစားသမားကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်ပြီးလျင်မြန်စွာအဆင့်မြင့်တက်လာပြီးကမကထပြုသူဖြစ်သည် Jurassic World, သူမ၏လွတ်လပ်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများသောအားဖြင့်အုပ်စု၏ကျန်နှင့်အတူများသောအားဖြင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ပေမယ့်သူမ၏ပြိုင်ကားဆန်သောအသေးစား partသူမသူမ၏သဘောထားကိုတက်သည်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ။ Darius သည်ဒိုင်နိုဆောများကျွမ်းကျင်သောသူဖြစ်ပြီးကျွန်းပေါ်တွင်အသက်ရှင်သန်ရန်အဖွဲ့ကိုများသောအားဖြင့် ဦး ဆောင်သည်။
သငျသညျ 2021 ခုနှစ်တွင် Camp Cretaceous minifigures အသစ်များအဖြစ် Owen Grady နှင့် Claire Dearing ကဲ့သို့သောပြန်လာဇာတ်ကောင်အားလုံးရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မယ် Lego Jurassic World အစုံ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှာသူတို့ဖွင့်တဲ့အခါမှာသူတို့ထဲကတစ်ခုကတောင်ပါဝင်တယ် ထူးဆန်းရေနေဒိုင်နိုဆော.
← Lego အသစ် Jurassic World အစုံရေနေဒိုင်နိုဆောပါဝင်သည်
LEGO CON တွင်သင်မြင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည် →